Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha roa namoy ny ainy nadonan’ny fiara tamin’ny hazo - ewa.mg
Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha roa namoy ny ainy nadonan’ny fiara tamin’ny hazo
News - Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha roa namoy ny ainy nadonan’ny fiara tamin’ny hazo
Tsy tana ny ain’ny mpamily sy ny mpandeha iray tamin’ny fiara marika “Mercedes Sprinter Fourgon” niharan-doza tany Vohitranivona-Brickaville amin’ny lalam-pirenena faharoa, afak’ omaly. Nitondra mpandeha folo io fiara io avy any Ambohimahasoa raha nikasa ho any Savalaina saingy nidona tamin’ny hazo letisia lehibe iray talohan’ny nivoahany ny lalana.
Ahiana ho vokatry ny torimaso fotsy nahazo ny mpamily no nahatonga ny loza, raha ny tombantomban’ireo zandary nidina ifotony nijery ny voina niseho. Naratra ny efatra tamin’ ireo mpandeha ary samy efa manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly any Brickaville. Nahitana fahapotehana lehibe tokoa ny fiara.
L’article Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha roa namoy ny ainy nadonan’ny fiara tamin’ny hazo est apparu en premier sur AoRaha.
Imerintsiatosika: jiolahy 10 vosambotry ny zandary
Ravan’ny zandary avy ao Imerintsiatosika ny tambajotran-jiolahy ikoizana ahitana 10 lahy ao amin’ny kaominina Imerintsiatosika. Jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadina ireo tratra, ny asabotsy teo, taorian’ny hetsika nataon’ny zandary. Fantatra fa maro ireo fitarainana voaray mahakasika ny horohoro, vaky trano sy fanafihana mitam-piadina ataon’ireo jiolahy. Vokany, nanao hetsika manokana hampandrian-tany ny zandary. Tratra tamin’izany ireo entana halatra isan-karazany. « Sarona tao amin’ny trano fieren’izy ireo ny rongony telo kilao. Ireo fitaovana toy ny basy poleta vita gasy iray miaraka amin’ny bala miisa 9 miampy chargeur miisa roa », hoy ny fanazavan’ny zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao. Nambarany fa hita tao an-toerana ihany koa ny « barre à pince » sy ny antsy lava fampiasan’ireo olon-dratsy. Nohamafisin’ny loharanom-baovao hatrany fa mpamatsy balan’ireo jiolahy mihitsy ny roa lahy amin’izy ireo. Henintsoa HaniL’article Imerintsiatosika: jiolahy 10 vosambotry ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Herisetra mahery vaika :: Tanàna may sy vono olona noho ny valifaty
Tsy fanafihan-dahalo tsotra fa ahiana ho valifaty no antony nanafihana ny tanànan’i Beombalahy, kaominina Anjomaramaritina, distrikan’i Mandoto, tamin’ny alahady lasa teo. Olona efatra no maty raha fito no naratra, ankoatra ny fahamaizan’ny trano am-polony. Tsy latsaky ny telopolo sady miandahy miambavy ireo mpanafika, tamin’izany fotoana izany. Manao ny fanarahan-dia sy ny fanenjehana an’ireo olondratsy ny zandary any antoerana, saingy tsy mbola nahazoana tatitra amin’ny mety ho fivoaran’ny fikarohana. “ Mety ho mifandray tamin’ny fahafatesana dahalo mpangalatra omby avy tany amin’ ny faritra Tsiroanomandidy, herintaona lasa izay, ity fanafihana tany Beombalahy ity”, hoy Rakotorahalahy Modeste, solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Mandoto. Nandray an-tanana sy mikarakara an’ireo mponina niharam-boina izy, nandritra ny fidinany tany an-toerana nijery akaiky ny zava-misy. Tamin’ny 2 ora maraina, tamin’ny alahady, no tonga tao amin’ny tanànan’i Beombalahy ny andian’olona am-polony izay nanapoaka basy, nandroba sady nandoro trano. Maty voatifitra ny olona efatra: ny vadin’ny lehiben’ny fokontany, ny katekista ary lehilahy sy vehivavy iray. Naratra voatifitra ihany koa ny olona dimy. Olona roa hafa may noho ny firehetan’ny trano. Omby roa ihany kosa no nalain’ireo mpanafika. Maherin’ny efapolo ny zandary nalefa nanao ny fikarohana, hatramin’ny omaly. Dia an-tongotra an-kilaometatra maro any amin’ny toerana sy vohitra tsy tongan’ny fiara no ataon’izy ireo ary fantatra fa mizotra mankany amin’ny faritra Bongolava. L’article Herisetra mahery vaika :: Tanàna may sy vono olona noho ny valifaty est apparu en premier sur AoRaha.
Tambajotran’ireo mpamoron-dihy aty Afrika: voatendry ho tale ara-javakanto i Gaby Saranouffi
Vaovao lehibe ho an’ny tontolon’ny dihy. Voatendry ho tale ara-javakanto ho an’ny tambajotra iarahan’ireo mpandihy sy mpamorona soradihy aty Afrika i Gaby Saranouffi. Hiara-hitantana aminy amin’izany ilay mpandihy togoley, i Nadège Amatogbe, mandritra ny telo volana ho avy (febroary, marsa ary avrily 2021). Teraka nandritra ny fihibohana nisy maneran-tany ity tambajotra ity, enim-bolana lasa izay. Tanjona ny hanambarana ny ankamaroan’ireo mpandihy sy mpamorona soradihy. Sehatra ifampizarana vaovao sy kanto izy ity, ary ho fifampahafantaran’ireo mpanakanto ihany koa, mba hisian’ny fifanakalozana bebe kokoa. Mazava loatra fa mba hisian’ny firaisankina sy ny fifanohanana eo amin’ny sehatry ny dihy aty Afrika koa ny tena tanjona. Araka ny nampitain’i Gaby Saranouffi, hitondra fijery vaovao ao anatin’ny fandaharam-potoana isaky ny hetsika hokarakarain’ny tambajotra izy roa mpitantana. Tafiditra ao anatin’izany ny fadaharam-potoana natokana ho an’ny vehivavy manokana, ao anatin’ny lohahevitra « Ny tenin’ny vehivavy ». Ireo mpandihy sy mpamoron-dihy vehivavy efa voky traikefa no hifanakalo amin’ireo tanora vao miditra anatin’ny tontolo, mandritra izany. Anisan’ireo handray anjara amin’izay fifanakalozana izay ilay mpandihy malagasy, i Judith Manantenasoa, miaraka amin-dry Germaine Acogny avy any Sénégal sy Flora Théfaine avy any Togo.Zo ny AinaL’article Tambajotran’ireo mpamoron-dihy aty Afrika: voatendry ho tale ara-javakanto i Gaby Saranouffi a été récupéré chez Newsmada.
Andro voalohan’ny fifaninanana, taranja ady totohondry, ao anatin’ny andiany faha-12 amin’ny “Lalao afrikanina”, tanterahina any Maraoka, nahazo fandresena nanoloana ilay teratany zambianina, i Banda Ben, i Nomenjanahary Tony.Tsara fanomanana ny mpikatroka malagasy, miatrika ny “Lalao afrikanina” any Maraoka, taranja ady totohondry. Fahombiazana ny azon’ny solontena malagasy, sokajy latsaky ny 49 kg, i Nomenjanahary Tony Heriniaina, niditra an-tsehatra, omaly. Teratany zambianina, i Banda Ben, ny nifandona taminy nandritra izany. Tafakatra amin’ny dingana ampahavalon-dalana, araka izany, i Nomenjanahary Tony. Efa nambaran’ireto solontena malagasy ireto fa tsy natahorana loatra ny mpifanandrina, efa nanao fanazantena mafy rahateo ka nizotra tsara ny andro voalohany.Anjaran’Andrianarivelo Marco Jérôme indray ny hiakatra an-tsehatra, ho amin’ny anio, eo amin’ity taranja ady totohondry ity. I Marco izay eo amin’ny sokajin-danja latsaky ny 52 kg ary teratany zambianina ihany koa ni hifandona aminy. Nambarany fa efa vonona tsara izy ary hitady fandresena hatrany. “Nandeha araka ny tokony ho izy tsara ny fanomanana, tsy nisy ny tahotra ary vonona hiatrika ny fifaninanana ho amin’ny anio”, araka ny nambaran’i Marco Jérôme.Tsy nahomby ny taranja hafaAnkoatra ny taranja ady totohondry, nifaninana ihany koa, omaly, ny mpikatroka malagasy, ho an’ny taranja taekwondo sy tenisy ambony latabatra. Samy tsy nahita fahombiazana avokoa ireo solontena malagasy nandritra izany. Nihintsana teo amin’ny lalao fifanintsanana avokoa ireo mpikatroka ho an’ny taekwondo, nahitana an-dRakotoanony Sahondra (-49 kg), Ratovoarisoa Ialisoa (- 53 kg) ary Rakotobe Junko (-46 kg). Toraka izany koa ny taranja tenisy ambony latabatra, lavon’ny Nizerianina sy ny Kenyanina, tamin’ny seta 3 no ho 0, avokoa ireo solontena malagasy, teo amin’ny fifaninanana isam-bondrona lehilahy. Nifaninana nandritra ity lalao fifanintsanana, omaly, avokoa izy efatra mirahalahy: Rakotoarisoa Mamy Setra, Jonathan Brice Nativel, Razafindralambo Zo (Lino) ary i Lefitriniaina Rinauld. Mi.RazL’article “Lalao afrikanina” – Ady totohondry: tafakatra amin’ny ampahavalon-dalana i Tony a été récupéré chez Newsmada.